citylife | YANGON LITERARY MAGAZINE
Posted on April 22, 2017 by Kcmmaung	• Leaveacomment
Words By ခွန်းချို အင်းယားကန်ဘောင် / စိမ်းလန်းစိုပြေ / ဝက်သားတုတ်ထိုး / အင်းယားလမ်း / Serenity ၊ အဓိပတိလမ်းကျဉ်းလေး ၊ ပြည်လမ်း / ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး / တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ လှည်းတန်းလမ်းဆုံ၊ သိမ်ဖြူလမ်း ၊ စိန့် ပေါလ်မှတ်တိုင် / ရေကျော်/ ၄၉ လမ်း / လမ်း ၅ဝ / Memory DVD / လမ်းဘေးမှ ပလတ်စတစ်တောင်းနဲ့ဟောလိဝုဒ် ခိုးကူးခွေမျိုးစုံ (၂ ထောင်ဖိုး ၃ ခွေဆိုလား) ၊ စကော့ဈေး / မဂိုလမ်း / ခိုးကူးခွေမျိုးစုံ ပေါချောင်ကောင်း ရသော National CD … Continue reading →
Posted on September 12, 2016 by Kcmmaung	• Leaveacomment
by Myat Thwe Nyein ဒီနေ့ လမ်းအများကြီးလျှောက်ရလို့ ညောင်း သွားပေမယ့် ခဏထိုင်နားတုန်းက ဘောင်းဘီရှည်နေလို့ အာက်နားကိုခေါက်တင်ထားတဲ့ အလိပ်ကြားမှာ ပန်းအကြွေလေးညပ်နေတာကို တွေ့တော့ ပျော်စရာနေ့လေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ bus ကားကြပ်လို့ ကားခေါင်းခန်းမှာ ကျုံ့ကျုံ့ လေးထိုင်ရပေမယ့် ဘေးနားက ကားစီးဖော် ကလေးမလေး ကိုယ့်ပခုံးပေါ်ခေါင်း မှီပြီး အိပ်ပျော်နေလေရဲ့လို့ တွေးမိတော့ နှစ်ခြိုက်စွာ ပြုံးမိတယ်။ ဒီနေ့ အိမ်ကို လမ်းလျှောက်ပြန်တုန်း ရှေ့နားက ဦးလေးကြီးလွယ်ထားတဲ့ အိတ်ကို ကြည့်မိတော့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကို ဂဏန်းကြိုးနဲ့ ချည်ပြီး လွယ်အိတ်လို လုပ် လွယ်ထားတာတွေ့တယ်။ သူ့မျက်နှာကို ကြည့်မိတော့ အိတ်ကောင်းကောင်းမရလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ မျက်လုံးတွေကို မတွေ့ရဘူး။ … Continue reading →
Posted on September 9, 2016 by Kcmmaung	• Leaveacomment
It wasaSaturday night the first time I walked into the cozy indie cafe nestled deep in Minn Lane, San Chaung. The cafe was overflowing with young artists, souls thirsting for inspiration and maybeacold beer on the side. A poet was spilling her words intoamic hooked up toasmall … Continue reading →
Posted on September 3, 2016 by Kcmmaung	• Leaveacomment
by Tang Jiching If one were to takeasound clip of the city, It would be the throaty rumblings of an inhaled breath. A populace, long grown into their inheritance Nursed, onadiet of opportunism where there are no fixed professions only fixed destinies –and within its cardinal boundaries both the Hedonistic and … Continue reading →
Windows of Yangon: Standing Against Time
Posted on June 17, 2016 by Kcmmaung	• 8 Comments
Words by: Cristina Maria Chiorean Windows of Yangon: Standing Against Time isaphotography essay which unfolded over two months during Myanmar’s dry season, starting in January 2016. The old city of Yangon is mostly known for its bustling street life and amazing colonial architecture. Asatourist, you are often swept away by the noise … Continue reading →